Chiedza-basa Conveyor Belt, Rubberized Mucheka, Silicone Membrane - Cayce May
Inopa Rakawandisa Range reZvigadzirwa
kutendeseka uye kuvimba kunokwezva vatengi pasi rese
Wuxi Cayce May Technology Trading Co, Ltd iri munzvimbo yakaorera yeYangtze River Delta yezvehupfumi geometric centre, kumashure kwerwizi rweYangtze, Taihu yakatungamirwa. Kumabvazuva kuenda kuChinese upfumi nzvimbo-Shanghai makiromita zana nemakumi mashanu, kumadokero kubva kuguta rekare-Nanjing makiromita zana nemashanu, kumaodzanyemba kusvika Wuxi Sunan International Airport makiromita makumi mashanu. Jinghu uye yanjiang migwagwa miviri mikuru inosangana muJiangyin ndima, jiangyin Yangtze Rwizi mugwagwa mukuru bhiriji inotaurirana kuchamhembe nekumaodzanyemba kweYangtze rwizi, yakakosha nzvimbo yekutakura muYangtze Rwizi rwizi rwizi. Wuxi Cayce May Technology Trading Co, Ltd iri kumatunhu ekumabvazuva epaki yemaindasitiri.
Mushure mekugara muindasitiri yesilicone ...
Mushure mekugara muindasitiri yesilicone kwenguva yakareba, vatengi vazhinji vanonzwa uyu mubvunzo: zvigadzirwa zvesilicone zvine saizi imwechete kana kunyangwe chimiro chakafanana chine mitengo yakasiyana. Pamusoro penyaya iyi, paimbove paine ndakanetseka kwekanguva. Kugadzirisa dambudziko iri, pamusoro pe learnin ...
On-saiti kurapwa nzira dzekutakura dzive ...
1. Maererano nehukuru hwehuwandu hwekufambisa, iyo yakakamurwa kuita: B500 B600 B650 B800 B1000 B1200 Anowanzo shandiswa mamodheru akadai seB1400 (B inomiririra hupamhi, mumamilimita). Parizvino, kambani hombe yekugadzira inokwana ndeye B2200mm conveyor bhandi. 2. Maererano neakasiyana iwe ...